Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto Gobolka & Bulshooyinka. Sababta oo ah dhowaan ku dhawaaqay U beddelo istaraatiijiyaddeena deeqda, mar dambe ma aqbalno codsiyada deeqda cusub ee barnaamijkaan. A barnaamij cusub diiradda lagu saaray dhismaha sinnaan iyo jaaliyado loo wada dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa badali doona barnaamijkan. Ka raadi tilmaamaha barnaamijka dayrta 2020. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg our Bogga kheyraadka marinka wareejinta deeqaha. Hoos waxaa ku yaal qeexida barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka ee Mu'asasada u xilsaaran si habsami leh hoos ugu dhacday.
Waxaan raadineynaa xalal wax ku ool ah waqtiyada wanaagsan iyo kuwa xunba. Waxaan rabnaa inaan aqoonsanno oo aan hagaajinno sababaha asaasiga ah, taas oo macnaheedu yahay inaan rabno inaan joojino nidaamyada si loo saxo guul darrida suuqyada iyo siyaasadaha si loo helo fursado loo dhan yahay. Waan ognahay inaan sameyneyno isbeddel marka suuqyadu soo saaraan hantida iyo shaqo-helid badan oo deganayaal badan, siyaasadaha xoojiya guriyeynta iyo xasiloonida qoyska, iyo xalalka soo jiidashada khayraadka muhiimka ah iyo isdhexgalka qaybaha kala duwan.
Waxaan ka shaqeyneynaa gobolka caasimadda iyaga oo la shaqeynaya beelaha wax ku oolka ah si dhammaantood loogu wadaago barwaaqada gobolka. Waxanu ku guuleysaneynaa tan adoo abuuraya meelo halkaas oo dadka degan ay si siman u helayaan hantida asaasiga ah: guryaha, fursadaha dhaqaale, iyo kaabayaasha gaadiidka kuwaas oo isku xiraya shaqada, dugsiga, iyo bulshada. Hantida asaasiga ahi waxay bixiyaan dadka oo leh dariiqooyin isku kalsoon naftooda iyo qoysaskooda. Xoriyaddan oo kale waxay keenaysaa guryaha xasiloonida iyo shabakadaha taageera kuwaas oo u oggolaanaya dadka deegaanka in ay helaan iyo si buuxda u isticmaalaan ilaha waxbarashada, tababarka, iyo xirfadaha. Deganeyaasha dhaqaale ku guuleystey waxay dhisaan xaafado xoog leh iyo dhaqaale maxaliga ah oo abuuraya cusub fursadaha-Xameynaya hantida dheeraadka ah, dhiirigelinta ganacsiyada iyo kala duwanaanta dhaqaalaha, iyo dhisida raasamaal bulsheed. Xeelad fiican oo ah bulshooyinka sii xoogaysanaya waxay abuuraysaa dariiqooyin xooggan, oo kala duwan, iyo wadooyin loo dhan yahay oo loogu talagalay dadka, meesha, iyo suurta galnimada.
Kobcinta horumarinta gobolka waarta
Waxaan kobcinaynaa qorsheynta iyo horumarinta isdhexgalka kaas oo dhaqaale ahaan wax ku ool ah, jawiga deegaanka, iyo bulsho ahaanba loo siman yahay.
Taageer guryaha guryahooda
Waxaan taageernaa istaraatiijiyooyin guryo oo la awoodi karo iyo nidaamyo kordhiya xasilloonida qoyska iyo qoysaska isku xiraan fursado iyada oo loo marayo horumarinta gaadiidka gaadiidka, dejinta tamarta iyo tamarta, ballaarinta kala xulashada, iyo kor u qaadida helitaanka waxbarashada iyo shaqada.
Kordhin xaafado dhaqaale oo firfircoon
Waxaanu kor u qaadaynaa xaafadaha dhaqaale ee firfircoon ee abuuraya fursado iyo bixinta nidaam isku dhafan oo taageero ah.
Waa kuwan xeeladaha aan isticmaalno si aan u taageerno xeeladahaas.
Kobcinta horumarinta gobolka ee dib-u-kobcinta iyo horumarinta; xoojinta maalgashiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud; iyo kobcinta beelo badan oo nool.
Hirgelinta horumarinta isku dheelitirka ee isku xira nidaamka gaadiidka dadweynaha, meelaha bannaan, beeraha, guryaha, iyo cufnaanta shaqada si ay isugu xiraan dadka iyo meelaha fursadaha.
Dardar gelinta horumarinta shabakada gaadiidka isku dhafan ee xoojiya xoojinta xaafadaha iyo tartanada gobollada, faa'iidooyinka bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo, iyo xirida ilaha maalgashiga waayeelka ah.
Taageerida cilmi-baarista cilmi-baarista iyo mashaariicda muujinaysa bandhigyada iyo qaabeynta dib-u-habeeynta siyaasadda, iyo in la isku xiro lana kasbado dadweynaha, deeq-bixiyeyaasha, iyo kheyraadka gaarka ah.
Guryaha loogu talagalay All
Dardar gelinta xajmiga wax soo saarka, ilaalinta, iyo degenaanshaha guryaha la awoodi karo, oo ku xiran gaadiidka, shaqooyinka, iyo nadaafadda taageerada.
Horumarinta naqshadeynta iyo naqshad tayo sare leh oo dhisaya bulshooyin badan oo nool, oo abuuraya isku dheelitir iyo is-dhexgal balaadhan oo ah kala-doorasho guri.
Horumarinta iskaashiga si loo kordhiyo taageerada dadweynaha iyo ta gaarka ah ee guryaha la awoodi karo sida astaamaha asaasiga ah ee beelaha joogtada ah.
Horumarinta istaraatijiyadaha guryaha ee gobolka iyada oo loo marayo hay'ado horumarineed oo kor u kaca guryaha kuwaas oo kordhiya xulashooyinka tayada goobta iyo tamarta tamarta si ay dadka u abuuraan suuqyo caafimaad oo degaanka ah.
Istaraatiijiyadani waxay sida caadiga ah maalgelisaa falanqaynta iyo istiraatiijiyada iyo sidoo kale dadaal isku dhafan iyada oo loo marayo ururrada dhexdhexaadinta oo xoog leh Waa istiraatiijiyadda kaliya ee maalgelinta gobolada qaarkood.
Xaafadaha dhaqaale ee firfircoon
Ka shaqee dadka deegaanka, ururada, dawladaha, iyo ganacsiyada si loo gaaro horumar siman, abuurista fursado dhaqaale, iyo dhisida adkeysiga xaafadaha iyada oo loo marayo ficil wadajir ah, iskaashi, iyo isbedel siyaasadeed.
Hirgelinta habab ku salaysan xarumaha ku xiran dadka deggan isku-kalsooni dhaqaale, oo ay ku jiraan helitaanka fursadaha shaqada iyo fursadaha iyo taageerada shaqada qoyska.
Hagaajinta kobcinta tafaariiqda ganacsiga, ganacsiga, iyo horumarinta warshadaha cusub ee la soo doorto iyadoo loo marayo gaadiidka iyo hareeraha guryeynta (iyo jaalliyadaha ku hareereysan) kuwaas oo horay u sii wadi doona bulshooyin wanagsan oo hodon ah, kordhiya bulshooyinka dhaqaalaha ah.
Horumarinta horumarinta xaafadaha ee ku xiran xeeladaha horumarinta dhaqaalaha gobolka ee la shaqeynaya iskudubaridaha kala duwan ee bixiya shaqooyin tayo iyo xirfad shaqo mustaqbalka oo ku saabsan isku-kalsoonida dhaqaale ee weyn.
Shaqadeenu waxay aasaas u tahay meel ku salaysan, oo diiradda saaraysa ugu horrayn Minneapolis-St. Baasaboorka Baasaboorka ee Boosaasta oo ay ka mid tahay shaqooyinka gobolka oo dhan ee guryaha la awoodi karo. Waxaan xoogga saari doonaa inta badan shaqadeena metro ee xaafadaha la isku hayo iyo waddooyinka gaadiidka halkaas oo aan aragno fursado badan oo aan wali la helin. Waxaan dhagaysanay xubnaha bulshada, waxaanan hubinay inay cod ku leeyihiin sida ay xaafaddooda u horumariyaan.
Xiriirinta Nidaamyada iyo Bulshooyinka
Waxaan raadineynaa shaqo iyo taageero taageera oo dhamaystiran oo ku xiran nidaamyada iyo bulshadeena. Marka aynu kobcinayno khayraadka, waxaynu ku soo qaadannaa tiro xiriir ah oo cilaaqaad kala duwan leh oo aan la macaamilayn ururada, ururrada bulshada, dawladda iyo qaybta gaarka ah si kor loogu qaado isdhexgalka, isku xirnaanta, iyo ka-qaybgal isku dheelitiran oo ku saabsan ujeedooyinka la wadaago. Waxaan sidoo kale u shaqeynaa si isdaba-joog ah, kobcinta siyaasadda iyo saameynta miisaska-gobolka, metro, iyo xaafadaha - si loo abuuro fursado.
Qalabka badan ee aanu isticmaalno
Aqoonsiga in maalgelinta loo baahan yahay ay ka weyn tahay McKnight Foundation ama urur kasta oo kale oo keeni kara, waxaan ku dadaalnaa sidii loo kobcin lahaa ilo muhiim ah oo maaliyad ah iyada oo loo marayo siyaasadda iyo iskaashiga guud iyo xoojinta kartida suuqyada iyo qaybta ganacsiga gaarka ah si ay u maalgashadaan una abuuraan fursado. Waxaan si istaraatiijiyadeed u adeegsanaa saameyn ku dhisan iyo wadashaqeyn si ay u hoggaamiyaan cusbitaallada iyo miisaamidda xalalka Waxaan rajeyneynaa isbedel joogto ah iyo xisaabtana nafteena iyo deeq bixiyeyaasheena.
Qalabkeenna koowaad ee shaqadan ayaa ah horumarinta, isku-dubaridka, wada shaqeynta, xiriirka caydhinta, iyo dhiirigelinta siyaasadda dib-u-habeeynta horumarinta horumarinta gobolka, guryaha dadka oo dhan, iyo xaafadaha dhaqaale ee firfircoon.
Isku-dhafan oo Kala Duwan